Lehilahy iray 56 taona no tonga nametraka fitoriana tao amin'ny biraon'ny polisy 67 ha ny 15 aprily lasa teo fa nisy namaky ny tranony fitehirizany entana tao Ankasina. Araka ny fanambarana nataon'ity lehilahy ity dia ny marainan'ny alatsinainy 11 aprily teo tokony ho tamin'ny 09 ora teo ho eo izy no nahatsikaritra fa nisy fahabangana ireo entany tao nefa ny trano mihidy. Lasa tamin'izany ny kojakojana fiara maromaro mitentina 2 tapitrisa Ar. Rehefa nohadihadiana ity lehilahy ity dia nanondro lehilahy mpitarika sarety iray izay nahiahiny fa nahavita izao asa ratsy izao. Ny 15 mey teo dia nampanantsoina tao amin'ny biraon'ny polisy ity lehilahy mpitarika sarety ity natao famotorana. Niaiky avy hatrany moa ity farany vao nohadihadian'ny polisy ary mbola nanondro ny namany iray izay nanampy azy tamin'ny famoahana ireo entana nangalarina. Nosamborina ny sabotsy maraina 16 may teo ity lehilahy namany ity. Samy niaiky ny heloka nataony izy roa lahy ireo. Natolotra ny fitsarana ny sabotsy teo izy ireo.